URamaphosa uthi i-ANC isidlulile isimeni sokulawulwa kombuso | Scrolla Izindaba
URamaphosa uthi i-ANC isidlulile isimeni sokulawulwa kombuso
Ubufakazi bukaMongameli uCyril Ramaphosa kwikhomishini yokulawulwa kombuso bebungahehi ukwedlula udweshu olujwayelekile eluye lwenzeka phambi kweJaji uRaymond Zondo.
Kodwa ubufakazi bakhe kuleli sonto buveze obala inqwaba yamaphutha enziwe yi-ANC, futhi ezama ukubeka iqembu elibusayo njengelenza umsebenzi wokukhuculula udoti oshiywe yilowo owayemandulele.
Uphinde wahlonipha nezintatheli ebeziveze obala ukuthi zithunyelwe ukuveza udaba lokulawulwa kombuso kanti emazwini akhe okuphetha uthe: “Baningi abantu abakhokhe kakhulu ngokukhetha ukuma ngokuqinile [mayelana] nokulawulwa kombuso.”
URamaphosa uvumile ukuthi uhulumeni we-ANC, ngaleso sikhathi owawuholwa yilowo owayengumengameli wezwe, uJacob Zuma, wahudula izinyawo lapho ebhekene nabakwaGupta. URamaphosa wayeyiphini likamengameli ngaleso sikhathi.
UMengameli uthe kube nezinsolo zokuthi umndeni wamabhizinisi akwaGupta wawunezwi ngesikhathi kubekwa iKhabhinethi ngowezi-2011.
Utshele ikhomishini ukuthi uFikile Mbalula watshela umhlangano we-ANC National Executive Committee (i-NEC) ngowezi-2011 mayelana nokusebenzisana okuyimfihlo nabakwaGupta.
Nangesikhathi abakwaGuptaLeaks bengena obala emphakathini ngowezi-2017, uRamaphosa uthe iqembu lakhe alizange likubone lokho.
“Udaba lokulawulwa kombuso lwaphikiswa kakhulu kwi-ANC, futhi okumele kwenziwe kwaba negalelo ekuqhekekeni kwezinhlaka ze-ANC, kubalwa i-NEC, uhulumeni nePhalamende, kanye nakwezinye izindawo zomphakathi,” esho.
Ukugqama kwabe sekuphendukela lapho ayethole khona imali yakhe yomkhankaso ngesikhathi sengqungquthela ye-ANC ngowezi-2017.
URamaphosa ukuphikile walibeka ngembaba elokuthi wathenga amavoti kodwa wathi imali etholwe yithimba lakhe lomkhankaso isize ekuthengeleni abalandeli bakhe ukudla, i-airtime nezikibha.
Ukuthunyelwa kukaCadre kuphinde kwabhekwa ngenkathi uRamaphosa evuma ukuthi kunephutha.
Uthe abanye abantu abathunyelwe ezikhundleni ezithile kuhulumeni abanazo iziqu, amakhono kanye namava okusebenzela abantu.
URamaphosa uthe kuvele obala ngokuhamba kwesikhathi ukuthi abanye abathunyelwa abalungile.
Ubuye wavuma ukuthi iKomidi Lezokusatshalaliswa le-ANC alizange laziswe ngokuqokwa okuthile.